छाब्दी बाराही मन्दिरमा भक्तजनको भीड - Durbin Nepal News
छाब्दी बाराही मन्दिरमा भक्तजनको भीड
दूरबिन नेपाल १० बैशाख २०७६, मंगलवार १२:४३
दमाैली, बैशाख १० । गर्मीयाम शुरु हुन थाले सँगै तनहुँ व्यासनगरपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल छाब्दी बाराही मन्दिरमा पूजाअर्चनाको लागि आउने भक्तजनको भीड । उक्त देवीसँग भाकल गरेमा मनोकाक्ष पूरा हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ । छाब्दी बाराही मन्दिर दमौली बजारबाट करिब सात किलोमिटर पूर्व दिशामा पर्दछन ।
ब्यास ऋिषिकी आमा छाब्दी बराही पश्चिमाञ्चलकै प्रमुख तिर्थटनमा पर्दछ । छाब्दी बराही मन्दिर र सँगै रहेको कुण्डमा पुजा गर्न आउने दर्शनार्थीको सख्या अहिले निकै बढेको छ । साउन महिना, औषि र एकादशीमा बन्द रहने यस मन्दिरमा फागुन देखि जेठ सम्म भक्तजनहरुको बढी घुइचो लाग्ने गर्दछ । वेदब्यासकी आमा मत्श्य कन्याले छाब्दी देवीको रुपधारण गरि यस स्थानमा उत्पति भएकोले पुजा हुदै आएको मन्दिरमा रहेको शिला लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
विक्रम सम्वत १८०० को जेठ महिना देखि छाब्दीमा पुजा शुरु हुन थालेको हो । स्थानीय जहर सीं आलेमगरको गाईगोठमा बास माग्न गएकी बालिकारुपधारी देवीको निर्देशन अनुसार पुजा हुन थालेको हो । छाब्दी मन्दिरमा पुजा हुदा मनोकांक्षा पुरा हुने गरेको भक्तजनहरुको विश्वास रहीआएको छ ।
छाब्दीबराही देविको मन्दिरमा पुजा आर्चना तथा दर्शनका लागि तनहु“का साथै पश्चिमाञ्चलका अन्य जिल्ला तथा चितवनबाट उल्लेख्य मात्रमा दर्शनार्थीहरु आउने गरेको पाइन्छ । मन्दिरमा पुजाका साथै सगै रहेका कुण्ड र खोलामा रहेका आर्कषक माछाले पनि दर्शनार्थीलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ ।
छाब्दी बराहीका बारे मन्दिर परिषरमा रहेकाे शिलालेख
हजारौ बर्ष पहिला संयोगबस शिवजीको विर्य पान गर्न पुगी गर्ववती हुन पुगेको माछालाई एक दिन माझिले आफ्नो जालमा पारेछन् । माझीले माछाको पेट चिरेर हेर्दा कन्या पाएछ । माझीको सन्तान नभएकोले कन्यालाई पालेछ । दिनहरु वित्दै जादा माझी बुढो हुदै गएकाले ढुङ्गा चलाउन कन्याले मद्धत गरिछन् ।
एक दिन परासर ऋषिलाई पारी तार्न लाग्दा देवी रुपी कन्याको रुप देखि मुग्ध भएर संभोग गर्न खोज्दा कन्याले म सानु छु फेरी दिउसो संभोग कसरी भन्दा ऋषिले तत्कालै कुहिरो उत्पन्न गराई संभोग गरेछ र गर्भ पनि रहन गएछ । आखिर देवीको गर्भबाट वेदव्यासको जन्म भएछ । देवीले आफु कन्यामै आमा भै सबैको सामु नराम्रो हुन परेको गुनासो गर्दा ब्यासले भनेछन् “चिन्ता नलिनोस आमा म तपाईलाई यहा“बाट पूर्व दिशामा रहेको पवित्र ठा“उमा कुण्ड बनाई एक सय तीन तीर्थ स्थानको पवित्र जल ल्याई कुण्डमा राखी दिनेछु । जहा“ कलियुगमा गएर गएर तपाईलाई छाब्दी बाराही देवी भनी सबैले पुज्नेछन ।”
त्यसपछि वि.स. १८००।२।८ गते सा“झ अन्दाजी ८–९ बजेको समयमा देवी बालिकाको रुपघारण गरि श्री जहरसी आलेमगरको गाई गोठमा गएर बास माग्न गएछ । श्री जहर सी ले पनि बास त बस तर खाने कुरा भने केही छैन भन्दा मलाई केही चाहिदैन म बराही देवी हु म तलको कुण्डमा शिला भई उत्पन्न हुन्छु तिम्रो सन्तान दशेन्तानले मेरो नित्य पुजा अर्चना गर्नु भनि अलपीएछ । भोली पल्ट जहर सी आले मगरले सो कुण्डमा गई हेर्दा शिला भेटेछ । त्यस दिन देखि देखि नै जहर सी आले मगरले आफै पुजारी भै पुजा अर्चना गर्न सुरु हुन ताल्यो ।
वि.स. १९३१ सालमा श्री ५ सुरेन्द्र वीर बिक्रम शाह ज्यूको नाममा लालमोहर बक्स भयो । हाल सम्म श्री जहरसि आले मगरको सन्तानले पुजा गरि आइरहेको छ । इनी देवीको महिमा हाल अधिराज्य भर प्रचार प्रसार भै रहेको छ । आज सम्म भक्तहरुको भनाइ छ देवीले आफुले चिताएको मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ । हाल सम्म यस क्षेत्रमा बनेको मन्दिर पारी मुल मन्दिरकै भेटीबाट बनेको हो । यसमा कुनै सस्थाको सहयोग छैन ।
यस मन्दिर विहान सात बजे खुल्छ । सरसफाइ पछि आठ बजे देखि दिउसो साढे तीन बजे सम्म खुल्ला रहन्छ । साढे तिन बजे पछि मात्र पुजारीले खाना खान्छन् । साउन महिना भारी, औसि र एकादशीमा पुजा हुदैन । मन्दिर बन्द रहन्छ ।
केशवटार गाविस वडा नम्वर सातमा रहेको छाब्दी मन्दिरमा हाल सम्मका पुजारी
१, श्रीजहर सी आलेमगर १८००।२।९ देखि १८२९।८।२० सम्म
२, मनध्वज आलेमगर १८२९।८।२१ देखि १८५३।२।४
३, रजध्वज आलेमगर १८५३।२।५ देखि १८८७।३।२२
४, कहर सी आलेमगर १८८७।३।२३ देखि १९५१।९।२
५, लिलाध्वज आलेमगर १९५१।९।३ देखि
६, भुढे आलेमगर १९५१।९।३ देखि १९८३।४।६
७, रामु आले १९८३।४।७ देखि १९८७।३।५
८, मनबहादुर आलेमगर १९८७।३।६ देखि २०५६।१०।१३
९, क्याप्टेन कुल बहादुर आलेमगर २०५६।१०।१४ देखि
फाेटाे : सानेबहादुर नेपाली, रासस, तनहुँ
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १२:४३ मा प्रकाशित